शीतलनिवासको फोनले सनसनी, माधवले जंगिँदै भने- महिला भएर महिलालाई नै …’ – Etajakhabar
शीतलनिवासको फोनले सनसनी, माधवले जंगिँदै भने- महिला भएर महिलालाई नै …’
काठमाडौं, २ फागुन । माले स्थायी समिति बैठकक अत्यान्तै छरपष्ट हिसाबले एउटा विवादले प्रवेश पाएको छ । महिला, त्यसमाथि काठमाडौं उपत्यकाको नेवार जनजाति, पार्टीगत हैसियतमा पनि निकै वरिष्ठ, आधी आकाशले संसदीय मोर्चामा बलियो उपस्थिति जनाउन नसकिरहेको बेला सक्षम र अनुभवी भएर मात्रै पनि मुलुककै पहिलो अनि एकमात्र मुख्यमन्त्री बन्ने अवसरबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई विमुख पारिदिएको घटनामाथिको चरम असन्तुष्टि थियो, त्यो ।
आइतबारको सो विवादमा एउटी महिलाको बाटो अर्की महिलाकै सक्रियतामा छेकिएको भन्दै विषयले निकै गम्भीर मोड लिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उपस्थितिको प्रावधानबाट गुज्रदाँ अरुलाई नमूना देखाउने राष्ट्र नेपालमा यस्तो चित्त दुखाइको निशानामा पर्नुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ।
उहाँले विभिन्न नेता र गुटका ठूलाबडलाई आफैँले फोन गरेर डोरमणि पौडेललाई भोट हाल्न लबिङ गरेको आरोप लाग्यो । मुख्यमन्त्रीको कुर्सीनजिक पुगरे हिस्स पारिएकी अष्टलक्ष्मीको दुखेसो थिया, ‘अध्यक्ष स्वयंले अघि बढ्नु भनेपछि म उठेकी थिएँ । डोरमणी कमरेडले राम्रो मन्त्रालय चाँही दिनुस् है भन्नु भएको थियो,’ मैले हुन्छ भनेँ ।
‘मलाई विकास निर्माणमा सक्रिय बन्न मन छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाऊँ भन्नुभएको थियो, मैले त्यसमा पनि भैहाल्छ नि भनेकै हुँ । यसरी सबै कुरो मानेको मान्छेलाई रातारात महत्वाकांक्षी बनाएर उठ्न लगाई हराउने काम भयो । यसमा राष्ट्रपति नै संलग्न हुनुभयो । उहाँले डोरमणिको पक्षमा व्यक्तिलाई फोन गर्नुभयो ।’
अष्टको थप आरोप थियो, ‘०५२-५४ को सांसद खरिदबिक्रीताका झैं यसपटक पनि आफ्ना मान्छेलाई बेग्लै क्याम्पमा राख्ने, धम्क्याउने, लोभ देखाउने काम भयो ।’ शाक्यले गुटको पक्षमा गुण्डागर्दी नै भयो भनेपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल एकछिन जंगिएको बताइन्छ, ‘गुण्डागर्दी गर्न पाइन्छ ? पार्टीभित्रै यस्तो भाँडभैलो गर्न मिल्छ ? विद्याजीलाई राष्ट्रपतिमा पठाएको होइन ? अहिले अर्को महिलाका विषयमा चाहिँ स्वयं उहाँले यसरी चलखेल गर्ने ? ‘ भन्दै । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ०२, २०७४ समय: ९:३३:०६